Chelsea oo aan weli ka harin xidiga Barcelona Busquets. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo aan weli ka harin xidiga Barcelona Busquets.
Chelsea oo aan weli ka harin xidiga Barcelona Busquets.
Chelsea ayaa weli isha ku heysa sidii ay ula soo wareegi laheyd xidiga qadka dhexe ee kooxda Barcelona Sergio Busquets, laakiin waxay sugi doonaan ilaa xilli ciyaareedka soo aadan markaasoo ay bixinayaan qiimaha saxda ah ee lagu iibsan karo, sida uu qoray wargeyska Sunday People.
Si la yaab ah ayaa waxaa isbuucii lasoo dhaafay garoonka Comp Nou ugu safray, wakiilka ugu sareeya indha-indheeyeyaasha Chelsea Scott McLachlan wuxuuna soo daawanaayey inta badan ciyaarayahanka qadka dhexe.
24-jirkaan heerka caalami ee dalkaSpainayaa ka tegi kara kooxda Catalans, Chelsea ayaana la socota xaalkiisa, sida uu horaan ogaaday Wargeyska People Sport.
Barca ayaa wax ganacsi ah geli doonin inta lagu jiro bisha Janaayo, laakiin waxay u ogolaan doonaan inuu tago dhamaadka xilli ciyaareedka waxeyna ku iibin karaan 30 milyan oo ginni, hadii uu doonayo markaasi inuu ka dhaqaaqo kooxda ka dhisan La Liga.